Mila ny hafainganam-pandeha lalao an-tserasera maimaim-poana - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Mila ny hafainganam-pandeha lalao
hanangona ny ny vondrona ny mpitaingin, mifidy ny fiara sy hahita ny lalao Mila ho haingana maimaim-poana amin'ny aterineto. Iza moa ny zatovo tsy manonofy mikasika ny hafainganam-pandeha, fiara sy ny adrenaline fihetseham? Tsy ny milaza ny anankiray, ary rehefa mahatsapa ny rivotra fanoherana, ny mpikapoka miatrika onja mahery vaika, ny fahatsapana ny fahafahana! Fa mandra-tonga ny taona rehefa afaka mahazo ambadiky ny kodiarana fiara ity, no manoro hevitra anao mba hilalao lalao momba ny foto-kevitra sy mankafy ny soa aman-tsara ny hafainganam-pandeha. Na dia ny fihodinan'ny ho levona mandrakizay, ary azonao eny ny lalana efa voavoatra, vao mamorona hafa vaovao indray.
Lalao Mila ny hafainganam-pandeha tamin'ny Category:
Ny tsara indrindra Mila ny hafainganam-pandeha lalao
Nandresy Super 3D
Close sy hetsika
Haingam-pandeha fiara fitateram-bahoaka
Hazakazaka ho amin'ny fiara fitateram-bahoaka
Test fiara Hyundai
Ben 10: Fiaviana Manohitra ora ao amin'ny Istanbul Park
Hafainganam-pandeha eo amin'ny rano
Ny hazakazaka eo amin'ny rano
Hazakazaka ho amin'ny dragona-kamiao
Letaha mila hafainganam-pandeha
Race any an-danitra
Boat Racing in Miami
Hazakazaka manohitra ny Mini
Ny fahatsapana ny hafainganam-pandeha
Fa ilaina ny hafainganam-pandeha
Mila ny hafainganam-pandeha. Metro. Ny fifaninanana eo amin'ny tontolo eny-kilaometatra
Mahazatra manohitra hafakely
Hazakazaka kamiao 2
3D hazakazaka F1
Hazakazaka Grand Prix
Ny hafainganam-pandeha voalohany
Farany Mila ny hafainganam-pandeha lalao
Games Mila ny hafainganam-pandeha no hiantoka tsara ny toe-po sy ny mitaingina mampientam-po ny hazakazaka
Lalao Online Rehetra Mila ny hafainganam-pandeha lalao an-tserasera maimaim-poana
Raha mbola tsy nanandrana Ilaina ny milalao hafainganam-pandeha amin'ny aterineto, noho izany dia tsy hevitra izay hafainganam-pandeha.
Lalao tokony ho haingana ho an'ny tena daredevils
Tsy fotsiny hazakazaka, sy ny fifaninanana tsy misy lalàna, izay ny hany tanjona – tonga ny tsipika fahatongavana eo amin'ny habetsaky ny fotoana fohy. Eritrereto ange, nisy fifamoivoizana fahazavana! Inona no daredevil hihaino ireo fivoriambe? Raha toa ny milina sy ny mpandeha an-tongotra no tsy manam-potoana ho kivy ny lalanao – fa ny olana, satria ny drafitra dia tsy tafiditra ao anatin'ny lanonana. Ary raha na tsy voafetra ho amin'ny lalana, rehefa dia azo atao ny hanakorontana ny sisa amin'ny fifamoivoizana fitsipika, nitaingina ny sisin-dalana, dia toy izany no scaring olon-tsotra sy ny kamo alika amin'ny saka. Koa aoka isika hanao laharana sy hamoaka ny freins mba hizaha toetra ny fiara, ary ny selam-pitatitra ny fitsapana.
Aiza no misy ny loharanom-adrenaline
Mba tsy hitondra fiara aimlessly manodidina ny tanàna, dia ho vitanao kely ny andian-jiolahy niady tamin'ireo ady. Toby roa tsy nizara zavatra, ary ankehitriny ny disassembly nahazo famonoana faobe, izay tsy nahy nanjary olon-tsotra.
Rehefa mifehy ny fiara, malaza niala ny hividy na ny fahavalo hanenjika ny tenany, ary ao ny hetsika miezaka namely azy avy tao an-milina. Shootout amin'ny lalana hiviliana, ny lalao ho tena heloka Thriller, izay mbola velona ny olona amin'ny wheelbarrow sy bala haingana kokoa.
Inona no ao ambadiky ny siren? Polisy niraikitra lalana marina? Raha ny fahitàna azy, izy koa dia te-handray anjara amin'ny fety-bahoaka, dia izy no hiaraka aminao. Izao manana olana telo – mba hiatrehana ny fifaninanana fa tsy ho latsaka eo an-tanan'ny ny fahafahana misafidy sy ny fampiharana ny lalàna, mazava ho azy, tsy maty noho ny fifampitifirana.
Fidio ny milina mihitsy
Raha mahatsapa ny Fanahin 'ny mpisantatra, Mila ny hafainganam-pandeha mba hilalao an-tserasera ianao dia tena tia. Eto raha kely indrindra ny lalàna, fa ho toy ny fanehoana! Mandritra izany fotoana izany, dia afaka misafidy tena misy karazana hetsika, satria mpandeha fiara ho mahafinaritra. -Baiboly anananao traktera sy kamiao, sambo, fiaramanidina sy ny môtô, Raha fintinina, ny zavatra rehetra izay afaka mahatratra haingana. Ary te hifindra hiala amin'ny mahazatra milina, handeha amin'ny mazia karipetra, sakafo, mahafinaritra biby, tafondro baolina sy ny sisa.
Milina amin'ny rivotra cushions avy any amin'ny ho avy ho eny an-tsokosoko anay amin'ny endrika lalao video, ary manolotra ny handamina ny maso ao amin'ny tahan'ny, manomba mihoatra noho ny lalana. Mampiofana ao amin'ny dingan'ny fitantanana izany unearthly fitaterana, ho vonona ho amin'ny ny tarehiny eo amin'ny tena fiainana. Ary te hiala farany hahazo ny tany, nafindra ho any ny sambon sy mazava eo amin'ny kintana sy ny asteroids, deftly paika ampiasaina amin'ny habakabaka, miezaka ny tsy ho fifandonan'ny planeta amin'ny sambo hafa sy eny amin'ny lanitra.
Na aiza na aiza hampitombo ny hafainganam-pandeha kokoa? Angamba ao amin'ny fivarotana lehibe? Grocery sarety minia fitaovana amin'ny kodia sy ny mbola mangataka mba ho nandeha tao amin'ny lalantsara teo amin'ny talantalana amin'ny fananana. Mazava ho azy, ny fiarovana ny mpanjifa dia tsy nafana fo momba ny fitondran-tena mahery setra, fa manao zavatra mahafinaritra, ary ny tena zava-dehibe!
Azonao atao ihany koa ny maka fanahy ny tenany eo amin'ny herim-po sy ny haingam-pandeha Mila milalao an-tserasera, mitarika fiara ho any tsirairay ny handrinao dia handrin'ny, ary iza no hakodian'ny aloha, dia ho kanosa. Fanamby ny tenanao sy manao ny voalohany kosa ny fahavalo. Eny, ny ankizy dia afaka hitondra fiara fiara amin'ny latabatra an-dakozia, mamadika ny fiara be amin'ny hafainganam-pandeha feno eo anatrehan'ny breadcrumbs sy ny cutlery. Amin'ny fotoana hafa mandritra ny hetsika avy hatrany hivory faritra mba hanamboarana ny wheelbarrow. Fiara amin'izao hafainganam-pandeha mahatonga ny helok'ity amin'ny famolavolana ka nahita zavatra dia hanampy hitandrina azy araka ny tokony endrika. Raha te-hahatsapa ny vokatry ny Dry sy adrenaline, mihazakazaka ny lalao sy fahafinaretana no nanome!
raha atambatra taranaka efatra ny lalao filàna haingana, ka samy nampiasa zava-bita ny teo aloha ny dikan koa ny mandroso kokoa fivoarana,
, DreamWorks nividy ny sarimihetsika zon'ny manomboka ny kilalao sy tifitra tamin'ny Aprily 2013, natao tao Mendocino County Kaltfornii. Amin'ny fampifanarahana dia potrachno efatra ambin'ny folo sy ny vita herinandro sarimihetsika nataony tany teatra tamin'ny 2014.